Thomac Tuchel oo doonaya inay Chelsea safkiisa kusoo kordhiso mid ka mid ah xiddigahii shalay taakada u dhigay – Gool FM
(London) 20 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa shalay barbarro goolal la’aan ah la dhaafi weysey kooxda Wolverhampton Wanderers kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana macallinka Blues soo jiitay qaab-ciyaareedka xiddiga Wolves khadka dhexe uga ciyaara ee Ruben Neves.
Naadiga Chelsea ayaa dooneysa inay iska xoojiso khadka dhexe suuqa bisha January ee nagu soo fool leh kaddib markii uu fashilmay Saul Niguez oo maalintii ugu dambeysay suuqa xagaaga amaah kaga soo dhaqaaqay naadiga Atletico Madrid, tii oo ay jirto inay Mateo Kovacic iyo N’Golo Kante ay xilli ciyaareedkan la dhibaatoonayaan dhaawacyo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska Spain laga leeyahay ee Tofofichajes ayaa wariyay in Macallin Tuchel uu bartilmaameed ka dhiganayo Neves isla suuqa January, hase ahaatee, waxa uu wargeyska intaas ku daray inay Wolves ka go’an tahay inaysan si sahal ah ku iibin mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan bartamaha xilli ciyaareedka inkastoo ay qiimeyneyso dalab walba oo ka qiimo sarreeya 45 milyan oo euro.
Qandaraaska uu 24-sano jirka reer Portugal ku joogo garoonka Molineux ayaa dhici doona xagaaga 2024, waxaase baacsanaya kooxo ay ka mid yihiin Manchester United, Liverpool iyo Real Madrid kuwaasoo iyaguna adeeggiisa xiiseynaya.
Jurgen Klopp oo kooxdiisa Liverpool ka dalbaday inay rikoorkooda suuqa kala iibsiga u jebiyaan xiddigan